I-China Khaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+i-polyester yepensile esikhwameni sepeni evaliweyo kunye noyilo olutsaliweyo umququzeleli wengxowa yokuthambisa enkulu isipho esikhulu samadoda abhinqileyo kwi-ofisi yeshishini lezinto zokubhala zesikolo Abavelisi kunye naBaboneleli | Camei Ele&Stationery
IKhaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+ipolyester yepensile yengxowa yepeni evaliweyo enoziphu uyilo olunentambo yoyilo olukhulu lomququzeleli wengxowa yokuthambisa isipho esikhulu samadoda abhinqileyo sezinto zokubhala zeofisi yeshishini
Umba NO. : 3227 Isingxobo sePencil
Izinto eziphathekayo: Polyester+Leather
Ubungakanani: 220 * 45 * 75MM
NW : 3.4KG
20 GP Ubukhulu:16000PCS
40 GP Ubukhulu:35000PCS
IiMarike eziThumela ngaphandle: iYurophu, uMntla Melika, uMzantsi Melika, i-Oceania, iAsia
Esi singxobo sepensile seCa-Mei senzelwe ukugcina nokulungelelanisa iipeni, iipensile, iipeni zejeli, iziphawuli, iirabha, izikere, iiprotractor kunye nezinye izinto zokubhala. I-zipper ihamba kakuhle, kwaye i-polyester & yesikhumba intle kodwa ayinkulu. Uyilo lomzobo kunyekhakiumbala, iipogi ezincinci ezilungele abantu bayo yonke iminyaka. Iguquguqukayo kwaye inemisebenzi emininzi, nayo inokubonelelwa njengeepowutshi zokuzenzela, iikesi zeglasi kunye neebhegi zoncedo, ezihlangabezana neemfuno zakho ngowona mgangatho uphezulu.
Umgangatho ophezulu- Yenziwe ngemathiriyeli eyomeleleyo, engagugiyo yepolyester ibonelela ngokhuseleko olukhulu kuthuli, imikrwelo kunye namaqhuma.
Ixabiso elikhulu-Imilinganiselo: 220 * 45 * 75MM, imilo ende yetyhubhu. Icwecwe xa izip, ingena lula kwibhegi yakho yesikolo, ubhaka kunye nebhegi emfutshane. Ngexabiso elikhulu, iza neepokotho ezi-1 ezinkulu zeziphu kwaye unokubona ngokulula kwizinto zakho zokubhala kunye nezixhobo.
Uyilo olunesitayile-Ngoyilo lwentambo yokutsala, eluncedo kunye ne-zippy. Umsebenzi ogqwesileyo kunye noyilo olusebenzayo, olubambekayo, oluphathekayo, ubunzima obulula kodwa bomelele.
Umthamo omkhulu-Igumbi elingaphakathi ngokwenene, elilungele iipeni, i-highlighter, iingqekembe, izitshixo, izithambiso, izixhobo zokuzilungisa kunye nezinye izinto ezincinci. Akukho frills okanye iipokotho ezingeyomfuneko kwi-slim stationary case, elula kodwa esebenzayo.
IZipper egudileyo- I-zipper ye-top-notch iqinisekisa ukuvulwa nokuvala okugudileyo. Ukuthungwa okuqinisiweyo kwandisa ukuqina kweepencil case. Ukuvalwa kweziphu esemgangathweni, kulula ukuyivula nokuvala.
Imibala eyahlukeneyo-Sinemibala eyahlukeneyo yokukhetha, ukwenza ngokwezifiso zakho ozithandayo kwaye uphathe umhlaba wakho kulonwabo olunamandla!
Imisebenzi emininzi- Ilungele ukugcina iingqekembe zemali, kunye nezinye izincedisi, nazo zinokusetyenziswa njengeengxowa zokuthambisa.
Inkqubo yezobuchwepheshe- Ipleyiti yovavanyo lwaphambi kokubeleka–Ukusikwa kwezinto–Ukukhutshwa kwemathiriyeli–Ukuthunga–Ukupakishwa
Ulawulo lwemeko-Izixhobo zokujonga zifanelekile- Iworkshop QC itshekhi- Imveliso yokuhlola umhloli- Kugqityiwe ukukhangela umphathi- Umphathi weWarehouse khangela- AQL hlola
Ngaphambili: Ihexagon imilo yesipili esihlangeneyo esinemibala emi-2 ekhoyo yokwakheka kwesipili esiphathwa ngesandla kwicala eliphindwe kabini 3.5 intshi yesayizi encinci yepokotho yokuhamba yonke imihla.
Okulandelayo: Imilo ye-square cube ikhaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+i-polyester yepensile yengxowa yepeni yokuvala ngokuvalwa kweziphu enkulu umthamo omkhulu wengxowa yokuthambisa isipho esikhulu samadoda abhinqileyo sokuthenga izinto zokubhala ze-ofisi zesikolo
amadoda abasetyhini kwiofisi yeshishini lezinto zokubhala zesikolo
ngethwathwa & polyester
Ukujonga ushicilelo lwefashoni
Ingxowa yepensile ye-Multicolor yengxowa yosiba ene-zipper cl...
Ipateni yeentyatyambo ingxowa yepensile yepolyester enemibala ...
I-icon yeCartoon epholileyo ye-PVC ipolyester eneziphu ezivaliweyo...
Ilekese entle etshisayo iphila ilindisiweyo 5 ...
Umnyama omnandi kunye ne-unicorn yesikhumba ipolyester 4 co ...
Ubuso obuthandekayo obunoncumo lwengxowa yepeni yepensile ene ...